Gumiin Mirga Namoomaa Itoophiyaa woraanni Itoophiyaa Oromoo heddu ajjeesuu, gudeeduu fi gidiruu saaxile - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Gumiin Mirga Namoomaa Itoophiyaa woraanni Itoophiyaa Oromoo heddu ajjeesuu, gudeeduu fi gidiruu...
Gumiin Mirga Namoomaa Itoophiyaa woraanni Itoophiyaa Oromoo heddu ajjeesuu, gudeeduu fi gidiruu saaxile
Hedduu namootaa Agaaziin mataa fi dudda irra rasaasaan rukutaati kan ajjeese
Gumiin Mirga Namoomaa Itoophiyaa (Ethiopian Human Rights Council) ibsa guyyaa har’aa baaseen woraanni motummaan Itoophiyaa bobbaase Oromoo 100 oli ajjeesuu ifa godhe. Humna woraanaa kanaan dubartoonni Oromoo heddu gudeedamuu, namnoonni heddu daandii irraa guuramaa hidhamuu fi gidiraamuu saaxile gabaasni kuni.
Erga baatii Sadaasaa eegalee humni woraanaa Oromiyaa keessatti ummata irratti yakka ciccimaa hojjataa turuu isaati kan ragaaleen Gumiin Mirga Namoomaa Itoophiyaa wolitti qabe ifa taasise. Hedduun namoota ajjeefamanii fi madaayanii kan rukutaman mataa fi dudda irra. Kuni kan argisiisu humni Agaazii haa ta’uu jedhee ummata ajjeesaa fi sanyii Oromoo lafarraa balleessaa kan ture ta’uu isaati.
Namoonni ajjeefaman kanniin umriin 12 hanga 68 jidduu jiraniidha. Ammas ajjeechaan baay’inaan kan raawwate, akka gabaasa kanaatti, yeroo halkanii fi erga hiriirri xumuramee booda. Kan nama gaddisiisu ummannii manatti dheessus gocha gara-jabeenyaa Agaazii jalaa dheessee bayuu dadhabuu isaati. Namoota heddu kan mana isaaniitti itti seenanmee ajjeefame, rukutame, gudeedamee fi shororkaa cimaaf saaxilame, akka gabaasa Gumiin Mirga Namoomaa Itoophiyaa kanatti.
Hiriira boodaa fi gara halkaniiti kan humni Agaazii lubbuu Oromoota qulqulluu galaafatee fi lammii heddutti taphate. Erga hiriirri xumuramee boodaa fi yeroo halkanii wanti woraana hanga funyaaniitti hidhate sodaachisuu fi lubbuu isaanii balaa irra buusu tokko hin jiraatu. Akka mootummaan irra deddeebi’aa ololu lubbuun humna tika nagaa bifa kamiinuu balaa irra buutee osoo hin taane, woraanni babba’e dukkanatti dhimma bayuudhaan Oromoo irratti gocha duguuggii sanyii rawwataa turuu isaati kan gabaasa kana irraa hubatamu.
Gabaasni gumii mirga namoona kanaa kan argisiisuudhaaf carraaqe badiin Oromoo irratti raawwatamaa ture hedduu cimaa ta’uu isaati.
ajjeechaa oromoo irratti raawwatame
sarbamiinsa mirga oromoo
yakka oromoo irra gaye
Previous articleBakka ajjeechaan hin dhaabannee fi gaafiin Oromoo deebii hin argannetti falli hiriiraa fi qabsoo itti fufuu qofa
Next articleUN Human Rights Council Itoophiyaa irratti dhiibbaa cimaa akka godhu Human Rights Watch gaafate